Ilay Sahona Miteraka Amin’ny Vavany | Nisy Namorona ve?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ourdou Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Ilay Sahona Miteraka Amin’ny Vavany
HAFAKELY ny ataon’ity sahona any Aostralia ity rehefa hiteraka! Ateliny ny atodiny ka lasa ao amin’ny vavoniny. Mitombo ao mandritra ny iray volana sy tapany izany, ka avoakany amin’ny vavany rehefa foy. Heverina fa efa lany tamingana io sahona io tamin’ny 2002.
Dia tsy levona ao anaty vavoniny ao ve ny atodiny? Tsia, satria tsy mihinana na inona na inona mihitsy izy rehefa bevohoka. Tsy mamoaka asidra mandevon-kanina mihitsy koa ny vavoniny, noho ny zavatra simika avoakan’ireo zanany kely.
Atody 24 eo ho eo no ao anaty vavonin’ilay sahona. Efa hila hitovy amin’ny antsasaky ny lanjan’ilay reniny ny lanjan’ireo zanany ireo. Eritrereto hoe vehivavy 68 kilao no bevohoka zaza 24, izay milanja 1,8 kilao avy! Rehefa mitombo ny zanany, dia mitatra be ny vavonin’ilay sahona ka fisaka tanteraka ny havokavony. Voatery miaina amin’ny hoditra àry izy.
Mivoaka tsikelikely ireo zanaka sahona amin’ny ankapobeny, ka andro vitsivitsy vao tafavoaka daholo. Tsy miandry an’izany anefa ilay reniny, raha misy loza mampahatahotra azy, fa tonga dia aloany izy rehetra. Nisy mpikaroka, ohatra, nahita sahona vavy namoaka sahona kely enina indray niaraka avy ao am-bavany. Naloany mafy be izy ireo ka nipitika ambony, efa ho iray metatra!
Misy milaza fa nivoatra miandalana ny biby. Mitombina ve anefa izany, raha jerena ity sahona ity? Rehefa hiteraka mantsy izy io, dia misy fiovana be ny ao anatin’ny vatany sy ny fomba fiainany. Tsy maintsy miara-mitranga anefa ireo fiovana ireo, fa raha tsy izany tsy miteraka izy. Nanohana ny evolisiona ilay mpahay siansa atao hoe Michael Tyler, kanefa izao no nosoratany: ‘Sarotra be ny mieritreritra hoe nivoatra miandalana io sahona io, ka lasa miteraka amin’ny vava. Raha tsy miova tanteraka mantsy ny ao anaty vatany ao, tsy afaka miteraka hoatr’izany izy. Ny mitombina kokoa dia hoe indray mitranga ilay fiovana, sady tonga dia fiovana be.’ Misy àry mpahay siansa milaza fa tsy nivoatra miandalana izany rehetra izany, fa tsy maintsy nisy namorona. *
Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona ve ny sahona miteraka amin’ny vavany, sa nisy namorona?
^ feh. 7 Nilaza i Charles Darwin tao amin’ilay bokiny hoe Ny Fiandohan’ny Karazan-javamananaina (anglisy), fa ‘mandeha tsikelikely ny fiovana miandalana, sady ela be vao misy fiovana kely, fa tsy misy hoe miova be tampoka izany.’
Hizara Hizara Ilay Sahona Miteraka Amin’ny Vavany